Redmi 10 oo loo maleynayay inuu ku daatay TENAA oo leh batari dhan 6000 mAh | Androidsis
Redmi waxay dhammeyneysaa wax walba oo diyaar u ah inay soo saarto taleefan casri ah oo cusub, oo suuqa ku dhufan doona toddobaadyada soo socda ama, sida ugu fiican, dhawr maalmood gudahood. Magaca terminaalkan wali lama yaqaan, laakiin waxaan horeyba u haynaa qaar ka mid ah astaamahiisa iyo qeexitaankiisa farsamo ee xaday
Sa wuxuu horey uga hadlay dhowr ka mid ah taleefannada gacanta. Waxaa xitaa la sheegay in casriga cusub ka Taxanaha Redmi Note 9 way soo dhowdahay goor dhow, marka waa macquul in sirta sirta ah ee hadda soo ifbaxday ay iska leeyihiin reerkaan. Sidoo kale Waxaa jira tuhunno muujinaya in moobilkani uu noqon karo Redmi 10. Waxaan ka shakisanahay inay tahay Redmi Note 10, waa wax sidoo kale la soo sheegay, laakiin wax waliba waxay ku habboon yihiin suurtagalnimada. Hoos waxaan ku faahfaahin doonnaa waxa hadda la siiyay daadinta.
Mid ka mid ah boosteejooyinka soo socda ee Redmi waxay yeelan doonaan batari bahal
Si batari 6.000 mAh ah Waxay kuugu muuqataa mid liidata, ka fikir markale. Redmi qarsoodiga ah ayaa TENAA ku caddeysay batterigan, kaas oo hubaal ku bixin doona fara badan illaa 2 maalmood hab deggan oo celcelis ahaan loo isticmaalayo. Tani way ka sarreysaa heerka, marka lagu daro soo-jeedinta in ay lahaan lahayd tikniyoolajiyad degdeg ah oo lacag lagu buuxiyo iyo, sidaas darteed, dekedda USB-C-C.
Iyada oo ku saleysan sawirada xaday ee taleefankan casriga ah, waxaa jira guddi gadaal ah oo ka kooban qaabeynta afar kamaradood oo gadaal ah oo ku yaal guri afar geesle ah oo ku yaal geeska bidix ee kore iyo waxay la imaan laheyd xalka 48 MP xalliyaha ugu weyn.
Redmi 10 ayaa lagu soo oogay TENAA
Liiska TENAA wuxuu muujinayaa 2.0 GHz max processor. kaas oo ka mid noqon kara Mediatek Helio G85 processor chipset, kaas oo lagu arkay Redmi Note 9. Kaamirada hore ee taleefankan waxaa lagu diiwaan geliyay qaraar dhan 8 MP, oo hooseeya waxayna muujineysaa suurtagalnimada moobiilkan inuusan noqon karin Xusuusnow oo ku garaac suuqa sida soo socota Redmi 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Redmi cusub oo wata batari 6000 mAh ah ayaa ku socda wadada: waxay noqon kartaa Redmi 10
Sida loo maareeyo ogeysiisyada Twitter ee qalabkaaga Android